SHARK X3 - ရေကူးနိုင်သည့်ရေလုံနိုင်သည့်စမတ်ဖုန်း | Androidsis
SHARK X3 ရေစိုခံနိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီနေ့မင်းတို့အကြောင်းမင်းတို့ကိုပြောသွားမယ် ကွဲပြားခြားနားသောစမတ်ဖုန်း ကျန်တဲ့။ အလုပ် (သို့) အပန်းဖြေဖို့အတွက်အရည်ပျော်ပစ္စည်းအနီးအနားမှာအချိန်အများကြီးဖြုန်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံး။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများတင်ပြခဲ့သောအဓိကပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ရန်ခေါ်ပါ, su vulnerabilidad ante los líquidos.
ကုမ္ပဏီအများစုသည်နာရီနှင့်ချီလေ့လာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသည့်အရာ။ ဒါ့အပြင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့မှာစျေးကွက်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းတွေရှိတယ်၊ မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အရည်အတွက်ဗတ္တိဇံခံရတောင်မှနိုင်စွမ်း။
1 SHARK X3 သည်ရေကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
2 El SHARK X3 tiene una potente linterna, LED roja y hasta silbato
SHARK X3 သည်ရေကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ကျနော်တို့စမတ်ဖုန်းများဘာမျှမကဲ့သို့စိုစွတ်သောအရာအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုတွေ့မြင်ပေမယ့်။ ဤကြော်ငြာတောင်းဆိုမှုများကိုအသုံးပြုသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ဤအလေ့အကျင့်များအားတားဆီးရန်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ ပင်နေ အချို့ကိစ္စများတွင်ဖယ်ထုတ်အရည်အရည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ တစ်ခုခု မရဒီ Shark X3 နှင့်အတူရေအနီးရှိဖြစ်မွေးဖွားလာ။
ရှိသည့်ဖုန်း IP68 လက်မှတ်။ ဘယ် SHARK X3 ကိုလုံးဝရေစိုခံဖုန်းဖြစ်စေသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း နှစ်မီတာအနက်အထိမိနစ် ၆၀ ထိရေငုပ်ခြင်း "tousled မ။ " ၎င်းသည်မှိုများနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိရုံမကပါ။ ၎င်း၏တင်းကျပ်စွာကြောင့်ရေထဲသို့ကျသွားကိုကြောက်မည်မဟုတ်။
IP68 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည့်စမတ်ဖုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သော်လည်း ရှိပါတယ် စျေးကွက်တွင် SHARK X3 ကိုထူးခြားစေသည်။ မတော်တဆရေနစ်သေဆုံးလျှင်ဤဖုန်းသည်မျက်နှာပြင်သို့သာတက်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါက float လုပ်တဲ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းပဲ။ သင့် system အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Air Capsule, မျက်နှာပြင်၏နောက်ကွယ်တွင်ဝှက်ထားသောလေအိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမိုဘိုင်းကိုနစ်မွန်းစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်.
SHARK X3 တွင်၎င်း၏အကြမ်းခံနိုင်မှုအတွက်လုံခြုံရေးစနစ်ရှိရုံမကပါ။ ဒါ့အပြင်လာပါတယ် equipado con la tecnología «Keep Alive»။ အချို့ မတော်တဆနှစ်မြှုပ်ခြင်း၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အလင်းအချက်ပြထုတ်ပေးကြောင်းအာရုံခံ။ ထို အရေးပေါ် SMS ပို့ရန်အလိုအလျောက်စီစဉ်နိုင်သည်. Y ayudarteaque también te mantengasasalvo.
ဒီစမတ်ဖုန်းမှာ prestaciones propias de una herramienta de supervivencia အစွန်းရောက်အခြေအနေများတွင်။ အဲဒါရှိတယ် အစွမ်းထက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနှင့်အနီရောင် LED ဒါကသင့်ကိုမဆုံးရှုံးစေဘဲတည်နေရာကိုကူညီလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုတွေ့ရတာအပြင်သူတို့ကမင်းကိုနောက်ကျောမှာကြားနိုင်တယ် ထို့အပြင် built-in ပီပီရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ဖုန်းကိုယ်နှိုက်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ တစ် ဦး ကပီပီ အထိ 100 decibels ၏အသံထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းs.
El SHARK X3 tiene una potente linterna, LED roja y hasta silbato
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည် SHARK X3 ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အချို့သောအသုံးပြုမှုများအတွက်မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံးအနေနှင့် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ သင်သည်ပင်လယ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်သို့မဟုတ်သင်၏အားလပ်ချိန်များတွင်ရေအားကစားများတွင်ပျော်မွေ့ပါကဤဖုန်းသည်သင့်အားအခက်အခဲတစ်ခုထက်မကသက်သာစေနိုင်သည်။ ၎င်းကို ၀ တ်ဆင်ထားပါကမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအဆက်ပြတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းသည်အရည်များကြောင့်ပျက်စီးနိုင်သည့်အတွက်သင်မခံစားရပါ။
စမတ်ဖုန်း၏အင်္ဂါရပ်များသည်နှိမ့်ချရုံထက်မကပါ, လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကစမတ်ဖုန်း၏ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်မံတွေ့ရှိရသော်လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာသွားလာခြင်းမပြုရန်၎င်းတို့သည်လုံလောက်မှုမရှိပေ။ SHARK X3 ရဲ့အင်္ဂါရပ်များ5megapixel ကင်မရာ. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်နှင့် ၂.၄ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်.
ဒီ SHARK X3 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ Crosscall ကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့အပြင်ဘက်အပြင်အဆင်နဲ့ရေပတ် ၀ န်းကျင်တွေမှာအသုံးပြုမှုကိုသက်သာစေခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းအနေဖြင့်ပုံမှန်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်စမတ်ဖုန်းမဟုတ်ကြောင်းသိထားရာ software နှင့် hardware အဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်သောဖုန်းဖြစ်ရန်အခြေခံများတပ်ဆင်ထားသည်။
အဆိုပါ SHARK X3 ရှိပါတယ် 134 x 61 x 24 mm ၏အရွယ်အစားနှင့် 141 ဂရမ်အလေးချိန်။ သင်အားကစားလေ့ကျင့်ချိန်၌၎င်းသည်သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်၌စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အနက်နှင့်အပြာအရောင်များဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ နှင့်သူမ၏နည်းနည်း 950 mAh ဘက်ထရီ ၁၀ နာရီကြာအသုံးပြုမှုနှင့်နှစ်ဆယ့်ခြောက်ဆယ့်လေးနာရီခန့်၌ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုကတိပေးထားသည်။
ဒီမူရင်းစမတ်ဖုန်းကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ ၎င်းကိုအခြားကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်၎င်း၏စပ်စုသောထူးခြားချက်များကိုသတိပြုမိရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာမယ့် Samsung Galaxy ကိုပေါင်းစပ်ပြီးပီပီပြင်ပြင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ ဒါပေမယ့် တင်းကျပ်မှုနှင့် Air Capsule နည်းပညာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » SHARK X3 ရေစိုခံနိုင်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
သင်၏ Android အတွက်ဝစ်ဂျက်များဖန်တီးနည်း